March 2021 – Healthy Life Journal
———၊ ကိုထက် ၊——— လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ပုံ နည်းစနစ်အမျိုးမျိုးဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာသန်စွမ်းစေဖို့အတွက် ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းရဲ့ရလဒ်တွေကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေဖို့အတွက် အစာအာဟာရကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူအများစုဟာ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင် အားအင်ပြည့်အောင် အရင်အားဖြည့်ထားဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ယခုလေ့လာမှု...
———၊ ဇွန် ၊——— မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းတချို့ဟာ ရောဂါပိုးတွေ ကပ်ငြိပြီး နာမကျန်းမှုကို ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ လေ့လာမှုအသစ်အရ သိရပါတယ်။ အသန့်ရှင်းဆုံး မီးဖိုချောင်မှာပင် ပိုးမွှားရှိနေနိုင် လေ့လာမှုအသစ်အရ အိမ်ထောင်စု ၂၀ရဲ့မီးဖိုချောင်သုံး ပစ္စည်း ၁၄ မျိုးကို စစ်ဆေးကြည့်ခဲ့တဲ့အခါ...
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ပဲပင်ပေါက်ကို သေချာကျက်အောင် ချက်ပြုတ်မစားရင် အီးကိုလိုင်ပိုး ကူးစက်ခံရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကြောင့် ပဲပင်ပေါက်ကို စားရမှာ ခပ်လန့်လန့် ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ပဲပင်ပေါက်ကို သေချာဆေးကြောသန့်စင်ပြီး ကောင်းကောင်းချက်ပြုတ်စားသောက်ရင် ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ပဲပင်ပေါက်မှာ ကယ်လ်စီယမ်၊...
———၊ ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊——— Q. အမျိုးသမီးတွေရဲ့ရာသီလာတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို သိပါရစေ ဆရာ။ A. အမျိုးသမီးတွေရဲ့ မျိုးပွားအင်္ဂါတွေထဲမှာ သားအိမ်ဆိုတဲ့ အလုံးလေးရှိပါတယ်။ အဲဒီအလုံးလေးက ကြည့်လိုက်ရင် သေးသေးလေးဆိုပေမယ့် အံ့သြစရာကောင်းတာက ကလေးတစ်ယောက် သူ့ထဲမှာ ကြီးထွားနိုင်တာပဲ...
စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အခါ ကိုယ့်အခန်း၊ ကိုယ့်အဝတ်ဗီရို၊ ကိုယ့်အိမ်မီးဖိုချောင် စသဖြင့် တစ်ခုခုကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်ပါ။ လေ့လာမှုတွေအရ နေထိုင်တဲ့ဘဝမှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရှုပ်ထွေးနေတာတွေကို ရှင်းထုတ်ရင်း အလုပ်ပေးလိုက်တာက စိတ်ကိုပါ ရှင်းသွားစေပြီး တက်ကြွလာစေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
—–၊ ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– အသက် ၅၀ အရွယ် စာရင်းကိုင်အရာရှိ မစ္စတာဒီက နာတာရှည်ခါးနာရောဂါ ခံစားနေရတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ လလောက်က ကုလားထိုင်တစ်လုံးကို ပင့်တင်ရွှေ့ပြောင်းလိုက်တာကစပြီး ခါးနာခါးကိုက် ဝေဒနာရရှိလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ဖြစ်ချင်း မိသားစုဆရာဝန်နဲ့...
———၊ ကြယ်စင် ၊——— ကျောင်းတက်ရမယ့် ကျောင်းသား၊ အလုပ်သွားရမယ့်ဝန်ထမ်း . . စသူတွေ ကျောင်းနဲ့အလုပ်တွေမှာ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်ပြီး စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်း ကောင်းမွန်နေစေဖို့ နံနက်စာကို ရွေးချယ်စားသုံးသင့်ပါတယ်။ သစ်သီးစားပါ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်ပါဝင်တဲ့ သစ်သီးတွေကို နံနက်စာမှာ ထည့်သွင်းစားသင့်ပါတယ်။ သစ်သီးကို...